Ukuvakashelwa Okunethezeka eNdiya- Umqhubi Wezokuvakasha eBhubaneswar - 91-993.702.7574
Ukuvakashelwa Okunethezeka eNdiya
Kusukela ku-1993, i-Sand Pebbles Tour N Ukuhamba kuhlale kuhamba phambili ejensi yokuhamba e-Odisha ukuhlinzeka ngokugcwele futhi okuphelele ukunethezeka okuhambayo eNdiya Isipiliyoni.
Thola futhi uhlangabezane neminikelo yokuphoqelela futhi engenakunyakaziswa yezwe lobukhulu bokuklama.
Indawo encane ehlola, umhlaba ongaqondakali weNyakatho Ntshonalanga akungabazeki ukuthi indawo eyimfihlakalo yokuvakashela futhi ipharadesi engazange ihlolwe!
Hlola i-India ngezindawo zayo ezihlabayo nezindawo ezise-panoramic, amadlelo, izitidi zetiyi nokunye okuningi.
Hlola futhi uzwe izindawo ezithakazelisayo emhlabeni jikelele ngeziphesheli ezinhle kumaPhakheji wamazwe ngamazwe.
Amazwi ethu kumKlayenti
Amatshe amahlumela angomunye we-ejensi yokuhamba phambili kunazo zonke e-Odisha. Sasiba nohambo olumangalisayo kubo.
Kwakungokuhlangenwe nakho okungazikhunjulwa nge-Sand Pebbles Tour N Travels. Bancoma kakhulu!
Enye yezinto ezinhle kakhulu ongathola ngazo nge-Sand Pebbles Tour N Travels, i-ejenti yokuhamba phambili e-Odisha.
Ukuhamba u-Odisha nathi
Ukuphila luhambo. Sikholelwa ukuthi ukuhamba kungashintsha abantu ngezindlela ezingalindelekile. Misa okwesikhashana kusuka ngosuku lwakho oluhle kakhulu ukubuka le vidiyo bese uzicabangela ku-Odisha.
Phila, funda, thola futhi umangazwe wonke ubuhle obutholakalayo ukuthola. Woza ujabulele konke ubuhle nge-Tours Tours eNdiya kusukela kumagugu amasiko acebile kuya ezakhiweni ezinhle ukuya ngisho nasezindaweni zokubuka, ukuzwa ukukhanya okuhlanzekile njengoba senza uhambo lwakho lujabulise.